Kulanka Madaxda Dowlada Federalka iyo Dowlad Goboleedyada oo dib u dhac ku yimid – Radio Damal
Shirka rasmiga ah ee Madaxda dowlad federalka iyo dowlad goboleedyada dalka oo la filayay inuu maanta u furmo ayaa dib u dhac uu ku yimid iyadoo xalay kulan ay labada dhinac yeesheen uu qaatay saacado badan.
Waxaa kulankii xalay markii uu soo dhamaaday lagu ballamay in shirarka gaar gaarka ay sii socdaan, tan iyo inta la isaga soo dhowaanayo, iyadoo shirka weyn uusan maanta furmi doonin.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Madaxweynaha uu muujinayo inuu xoogaa ka soo dabcay mowqifkisii adkaa ee ahaa qof & cod, isla markaana doonayo in waqti la siiyo oo aan la dedejin, shirarka gaar gaarka ahna sii socdaan inta farsamo ahaan wax la is waafajinayo.
Labada qodob ee la kala taagnaa ee nooca doorashada ayaa weli xal laga gaarin sida qodobka maamul goboleedyada doonayaan ee doorasho dad-ban iyo qodobka doorashada qof iyo cod ee Madaxweynaha riixayo.
Madaxda Dowlad-goboleedyada ayaa intooda badan qaba in doorashadu noqoto mid dadban balse la kordhin karo kaqaybgalka dadweynaha, halka dhanka Dowladda ay ku doodeyso doorasho dadweyne.
Magaalada Dhuusamareeb waxaa ku sugan Madaxweynaha DFS, Ra’iisul Wasaarihiisa Xasan Cali Khayre, Madaxda Dowlad Goboleedyada Galmudug, Puntland, Jubbaland, KGS iyo Hir-Shabeelle.